Xakameynta xanuunnada faafa
Waa maxay xakameynta xanuunnada faafa?
Jeermiska qaarkiis si fudud ayuu hawa ahaan ugu sii gudbi karaa bukaannada kale. Xakameynta xanuunnada faafa waa hab looga hortago in xanuun la isu gudbiyo.
Maxaa ilmahayga loogu daray xakameynta xanuunnada faafa?
Sababta ilmahaaga loogu daray xakameynta xanuunnada faafa waa xanuun uu qabo ama qabi karo. Xakameyntan waa sida lagu yareeyo fursadaha ay ku dhici karto in ilmaha kale uu wax jeermis ah u sii gudbo.
Macluumaad dheeraad ah: ________________________________________________________________________